Somaliland: Danjire Michael Keating Oo Dhalliil Weyn Kala Kulmay Qorshe Uu Madaxweyne Biixi Ula Yimid - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Danjire Michael Keating Oo Dhalliil Weyn Kala Kulmay Qorshe Uu Madaxweyne...
Wakiilka Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Danjire Michael Keating ayaa dhaleecayn kala kulmaya bulshada Somaliland kadib qorshe uu madaxweyne Muuse Biixi ula yimid. Waxay u muuqata in Danjire Keating iyo madaxweyne Biixi ku kala fogaadeen xal u helidda xiisadda ka taaggan degmada Tukaraq ee gobolka Sool.
Xogo uu helay website-ka Sayruuq ayaa sheegay in Danjire Micheal Keating madaxweyne Biixi ula yimid Qorshe ah in ciidamada Somaliland ee fadhiisimida ku leh aagga Tukaraq lagu soo celiyo fadhiisimo ay hore ugu lahaayeen Gambadha. Xogaha ayaa sheegaya in madaxweyne Biixi arrintaasi ka gaws adaygay, islamarkaana ay ula muuqatay sida ay jecel yihiin Madaxweynaha Puntland Mr Gaas iyo madaxweyne Farmaajo.
Ciidamada Somaliland ayaa Tukaraq tagay Markii ay heleen warar ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya oo socdaal ku joogay Puntland doonayso in uu gobolka Sool soo galo. Waxa ka sii horeeyay wasiirkiisa Qorshaynta oo socdaal ku yimid degmada Badhan ee Bariga Sanaag.
Qorshaha Keating waxa sii xoojiyay maamulka Puntland oo shalay soo saaray qoraal jawaab u ah hadalkii madaxweyne Biixi ee dorraad oo ahaa in Soomaaliya ka baxday dhexdhexaadinta caalamka. Puntland waxay ku eedaysay madaxweyne Biixi in uu diiday qorshaha beesha caalamka ee ah in uu ciidamadiisa dib uga soo qaado Tukaraq.
Danjire Keating & Madaxweyne Biixi
Wakiilka Qaramada midoobay u fadhiya Muqdisho waxa uu u muuqda in uu la safan yahay xukumadaha Muqdisho iyo Garoowe, islamarkaana aanay isku san banaanayn madaxweyne Biixi. Arrimaha taas muujinaya waxa ka mid ah qoraallo uu ka soo saaray laba dagaal oo ka dhacay Tukaraq, kan hore wuxuu qoraalkiisa ku bilaabay “ Danjire Michael Keating wuxuu baaqa nabadeed ee Tukaraq kala midaysan yahay madaxweyne Farmaajo,” isaga oo daba socda baaq ka horeeyay oo Farmaajo soo saaray, halka baaqiisa dambe uu ku sheegay in bahwadaagta caalamka ee Soomaaliya nabad ugu baaqayso dhinacyada ku dagaallamay Tukaraq kuna baaqay in ciidamada la kala qaado.
Arrintani waxay keentay in Aqoon yahanno reer Somaliland ah iyo bulshada qaarkeed baraha bulshada iyo warbaahinta ku daabacaan qoraallo lagu dhalliilayo danjire Keating. Waxay ku eedeeyeen in uu dhinac ka yahay qaddiyadda Tukaraq islamarkaana lumiyay doorka dhexdhexaadnimo ee Qaramada Midoobay isaga oo si cad ula safan dhanka Muqdisho iyo maamulka Puntland.
Madaxweyne Biixi ayay tahay in uu hagaajiyo cilaaqaadkiisa beesha caalamka oo muddooyinkan dambe ku hawlan dib u dhiska Soomaaliya inkasta oo dalalka qaarkood niyad jab ka muujiyeen dadaallada badan ee aan ka soo raynta lahayn waxaana dalalkaas ka mid ah Jarmalka iyo Maraykanka oo joojiyay ama yareeyay kaalmada dhanka Militariga ee Soomaaliya. Wanaajinta sawirka nabadeed ee Somaliland dunida ka haysato ayay tahay muhiim in la sii wado iyada oo sida uu ku taliyay Ismaaciil Hurre Buuba ay haboon tahay in arrinta gobolka Sool loo adeegsado dadkeeda oo Somaliland la ogolaysiiyo lana tuso waxtar ka duwan Puntland.
Deg Deg: Muuse Biixi Oo Ciida Ku Soo Ciidi Doona Gobalka Awdal Iyo Cabdirashiid Xasan Mataan Oo Ku Biiray Xisbiga Kulmiye